उपचार नपाएर तीन बालबालिकाको यसरी गयो ज्यान
काठमाडौं ३ भदौ । बाढीका कारण बिरामी भएका तीन जना बालबालिकाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा, -बारबर्दिया नगरपालिका २ ढुंग्रहीका धरबहादुर थारुकी ९ बर्षीया छोरी अनिता, -बारबर्दिया नगरपालिक...
गाउँपालिका प्रमुख आइसके, अझै गाउँमा मुखियाकै शासन
मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा २४ वर्षीया छिरिङ ल्हामो निर्वाचित भइन् । सदरमुकाम जोमसोम रहेको घरपझोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा आसबहादुर थकाली निर्वाचित भए । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको तीन महिनापछ...
यी हुन् चार घन्टा बाढीमा बगेर बाँँच्न सफल भएकी सानुमाया
बर्खाको बाढीमा चार घन्टा लगातार बगेर पनि जीवित रहनु असम्भव नै हो । बाढीले झन्डै १० किलोमिटर टाढासम्म बगाउँदा साहस र संयोगले साथ दियो, त्यसैले बाँचिन् सानुमाया राई । तर, त्यही घटना उनका दिदी–भिनाजुका ल...
विभागको लाचारीले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू हुन सकेन
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन असफल देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय वैद...
काठमाडौं २ भदौ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल भ्रमण पूरा गरी बिहीबार फर्केका छन् । यो पछिल्लो ६ वर्षमा चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सन् २०१२ जनवर...
काठमाडौं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुप...
कुनै कर्मचारीले घुस मागे १०७ मा उजुरी गर्नुस्
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दिन टोल फ्रि नम्बर सार्वजनिक गरेको छ ।बिहीबार अख्तियारले आफ्नो कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टोल फ्रि नम्बर सार्वजनिक गरेको हो ...
झाँक्री जसले धेरैका श्रीमतीलाई…
काठमाडौं । सेतो गन्जी, सेतो धोती लगाएपछि घाँटीमा रुद्राक्षको माला लगाए । एक माना चामल, एउटा कुखुराको अन्डा, ५ फरक–फरक रंगका साना कपडाका झोली र एक रुपैयाँको सिक्का पैसा चरेसको थालीमा राखेपछि ‘ॐ नम शिवा...
कहाँ गए होलान् दुई हजार बालबालिका ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक बर्षमा नेपालभर गरी जम्मा दुई हजार बालबालिका बेपत्ता भएको पाइएको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक बर्ष २०७३ साउनदेखि २०७४ साउनसम्मको तथ्यांकमा सो कुरा उल्...
प्रचण्डको मधेस दौडाहा किन ?
एक साताअघि परेको वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानमा तराईका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएको छ । गृहमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीले कम्तीमा १ सय २८ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ३५ जना भन्दा बढी बेपत्ता छन् ।...
संविधान मिचेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको खुलासा
प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन आफूले अन्तरिम संविधान मिचेको स्वीकार गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सात वर्ष शीतल निवासमा बिताएका यादवले निवृत्त ...
भारतविरुद्ध गगन थापाको गर्जन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले तराई डुबान समस्या समाधान गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिुनपर्ने बताएका छन् । बाग्लुङ उद्योग बाणिज्य संघ अन्र्तगत महिला उद्यमी विकास समितको आयोजना गरेको दोस्रो द...
काठमाडौं । मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाको ‘रोग’ गृह मन्त्रालयमा सल्किएको छ । यसले गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने गरेको छ ...
‘आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ’
काठमाडौं । ‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ । आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ’ गीतको पंक्तिजस्तै संसद्मा सबै दलका सांसदहरूले तराई–मधेसमा बाढीपहिरोबाट आक्रान्तको समस्या मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड...
भारतीय र चिनीयाँ सेनाबीच ढुंगा हानाहान
काठमाडौं । भारतीय रनिीयाँ सैनिकबीच कश्मीरको विवादास्पद सीमा क्षेत्रमा झडप भएको छ । पेङगोत तालनजिकैको भारतीय सीमा क्षेत्रमा चिनीयाँ सैनिक प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि झडप भएको हो । त्यसक्रममा ढुंगा हाना...
काठमाडौं । संगठनको स्वरुप फौजी, संघर्षको स्वरुप युद्ध र विचार निरपेक्ष माओवाद भन्ने लाइन संरचनाबाट माओवादी आन्दोलनले आफूलाई अघि बढायो । यो सशस्त्र फौजी बलबाटै राज्यसत्ता कब्जा गरेर आफ्ना सम्पूर्ण योज...
बाढी पिडितलाई कुन दल कुन मन्त्रीले कति दिए ?
काठमाडौं । राजनीतिक दलको सहयोग कांग्रेसले एक करोड १५ लाख दिने कांग्रेसले दुई सय सात सांसदको एक महिनाको पारिश्रमिक बाढीपहिरोपीडितलाई दिने घोषणा गरेको छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार...
भारतीय तटबन्धले नेपालमा सधै डुबान
काठमाडौं । कोसीको पानी नेपाली भूभागमा छिरेका कारण सप्तरीको भारदहदेखि तिलाठीसम्मको करिब एक सय ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा परेको तथ्य फेला परेको छ । यसबाट ६ सय परिवारको उठिबास भएको छ भने हजारौं बिघा...
काठमाडौं १ भदौं । छविलाल जोशी र ठुले राइ नेपाल प्रहरीका डिआईजी हुन् । तर यी दुवै महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुखमा थन्किएका छन् । काठमाडौं र ललितपुर परिसर प्रमुख एसएसपी हुने प्रावधान भए पनि गृह मन्त्र...